WAR CUSUB: Kooxda Manchester United oo indhaha ku heysa inay la soo wareegto N’Golo Kante – Gool FM
(Manchester) 28 Maajo 2022. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa war cusub oo ku aaddan suuqa kala iibsiga laga helayaa, iyadoo markaan la warinayo inay indhaha ku haysto inay la soo wareegto N’Golo Kante.
Manchester United ayaa xagaagan indhaha ku haysa saxiixa xiddiga Chelsea ee N’Golo Kante, iyadoo Tababare Erik ten Hag uu rajeynayo inuu kooxdiisa ku soo kordhiyo labo ciyaaryahan oo khadka dhexe ah.
Diiwaanka ugu sarreeya ee Macallinka reer Holland ayaa la sheegay inuu garoonka Old Trafford ku keeno labo xiddig oo khadka dhexe ah, maadaama la filayo in Paul Pogba iyo Nemanja Matic ay kooxda ka tagaan.
Iyadoo Frenkie de Jong hore si weyn loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Man United, kooxda ayaa sidoo kale isha ku heysa Kante oo ay u doonayso booska burburinta khadka dhexe.
Wargeyska The Guardian ayaa warinaya in Man United ay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France, inkastoo Kooxda Chelsea aysan dooneyn inay iibiso xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka, tiiyoo ay jirto in haddana dhowr jeer ay dhaawacyo ku soo noqnoqdeen muddooyinkii dhowaa.